Tontalin'ny Tapa-potoana roa sy vita printy
2 Times Tabs Fact Worksheets
2 Timestables Target Workheet 1 amin'ny 5
2 Times Tabera Worksheet 1 amin'ny 5. D. Russell
Soraty ao amin'ny PDF ny Tabila roa tonta
Ahoana ny fampiasana ireo asa ireo
Ny lasitra lasibatra dia natao ho toy ny dartboard. Ny laharam-pokontany dia roa ary eo afovoan'ny takelaka lasibatra rehetra. Ny peratra manaraka dia mampiseho ny mampitombo ny isa voatokana, ny roa ary ny peratra ivelany ny lasibatra dia tsy misy ary ny valiny (vokatra) dia hosoratana ao. Ny fianarana ny zava-misy maro dia mety ho mampalahelo ho an'ny ankizy ary indraindray manampy izany hanova ny dingana. Ireo litera lasibatra ireo dia manova azy kely mba hanomezana traikefa hafa avy amin'ny asa soratra horonana na horonantsary nentim-paharazana.
Mba hiantohana ny ankizy amin'izao fotoana izao hianatra ny zava-misy sy hampiroborobo azy ireo, dia mitaky fizarana 10-15 minitra mandritra ny telo na efatra andro isan-kerinandro, amin'ny ankapobeny mandritra ny taom-pianarana sy indraindray. Ireo asa fitahirizana toy izany dia mila averina matetika matetika mandritra ny taona (s). Ampiasao ny fikarakarana atody na atsaharo ny famantaranandro ary tanisao hoe hafiriana no ilainy ny ankizy iray hamita ny asa atao mba handrosoana fandrosoana. Ny famelezana ny famantaranandro dia matetika mahasarika fialamboly fanampiny.
2 Timestables Target Workheet 2 amin'ny 5
2 Times Tabera Worksheet 2 amin'ny 5. D. Russell
Ny dingana roa matetika dia ny haingam-pandeha haingana mba hianatra sy hikatsaka fahatsiarovana. Raha ny marina, ny zava-misy tsy fantatra dia tsy maintsy atao rehefa avy nianatra ny tim, roa, dimy, efamira (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, ...) ny ankizy. Tokony ho arahina ny fizarana rehefa mikarakara ny zava-misy mba hahatsiaro ny ankizy. Ho an'ireo tabilao roa ireo, ny fianarana maromaro dia mampianatra ny zava-misy. Ny fiantsoana an-dalan'i Skip dia manondro ny 2, 4, 6, 8, 10, 12 sns. Na izany aza, rehefa manisa ny sidina dia aza manomboka amin'ny 2, mampiasa maromaro fidirana hanombohana. Mifandimby milaza azy ireo am-bava, manomboka amin'ny isa maromaro. Ohatra, izaho hilaza 4 ary ilay zaza dia hilaza 8, izaho hilaza 2 ary ny fomba fitenin'ny ankizy 4, noho ny isa rehetra lazaiko, ny zaza dia tokony hanome ny vokatra amin'ny fampitomboana ny isa roa amin'ny roa. Azonao atao ihany koa ny mahita ny tabilao 100 ilaina mba hampisehoana ny lamin'ny isa roa. Rehefa mampiasa ny sarin'ny zato dia asaivo mameno ny zaza ao amin'ny multiples (2,4,6,8, 10 ......) amin'ny 2.
2 Timestable Target Workheet 3 amin'ny 5
2 Tombon-tSatao Faha-3 amin'ny 5. D. Russell
2 Timestables Target Worksheet 4 amin'ny 5
2 Tombon-tSatao Faha-4 amin'ny 5. D. Russell
2 Timestables Target Workheet 5 amin'ny 5
2 Tombon-tSatao Faha-5 amin'ny 5. D. Russell
Fanitsiana fotodrafitrasa fototra
Fahasarotan-tsivana ho an'ny fianarana matematika
Times Fact Factors: iray amin'ny 12
Famahana ny olana isan-jato
Ahoana ny amin'ny nomeraon'ny laharana
Ny Modely Frayer ho an'ny matematika
Ny fitsipiky ny fitanana
Famaritana amin'ny bokotra
Tranom-bokin'ny Kianjan'ny Multiplication - Valiny momba ny 2 Pg. ny PDF
Worksheets ho an'ny fanodikodinam-bato roa-dika tsy misy fanovana
Ady amin'ny ady ary ny Ady amin'ny 1812
Ny vola miditra sy ny fitakiana ny fangatahana
Vodou: Fampidirana ho an'ny mpangataka
Fihazana fahiny - paikady mahaleotena alohan'ny fambolena
Karazan-tsary, endri-javatra, ary lohahevitra ao amin'ny 'God of Carnage' nataon'i Yasmina Reza
Ny adiresin'ny Oniversite Christopher Newport
Ireo singa ratsy indrindra amin'ny tabilao Periodika
Ny lanjan'ny hazo sy ny tombontsoa avy amin'ny tontolo iainana
Ny Torolalana feno ho an'ny Cartoons LEGO TV
Ny tantaran'ireo bugle antsoantso
Tari-dalan'ny mpitsidika ny fetiben'ny Hindu Krishna Janmashtami
History of Mr. Irrelevant ao amin'ny drafitra NFL
Firenena mpikambana ao amin'ny OTAN
Ny Irlandey Elk, ilay Dadabe lehibe indrindra eran-tany
The Bad Badge ny famintinana boky feno herim-po
Inona avy ny fianarana hataonao any amin'ny sekoly fianarana?
Ohatrinona ny saran'ny Obama?
CD CDs avy any Afrika Atsimo
Fanoroana an-tsakany sy an-davany
Ireo Top 10 fiara ho an'ny lehilahy
Ny Ady Lehibe Faharoa: Battleship Yamato
Ny fiaramanidina mitazona fiara manatsara ny teknolojia
Famotsoran-keloka sy fitsarana
Ny misterin'ny famonoana mahamenatra indrindra an'i Amerika
Ny fomba fitokonan'ny kiraro